Google AdWords vs. SEO: gini di mma?
Azịza ya dabere na ọdịdị azụmahịa gị. Tupu ị nyochaa ọwa ahịa ahịa ọ ka mma maka ịzụ ụgbọala na okporo ụzọ maka azụmahịa nke mmadụ - SEO ma ọ bụ Google AdWords, ka anyị buru ụzọ kọwaa okwu ndị na-esonụ. Nke a ga - enyere gị aka ịmatakwu nke ọma nke ga - arụ ọrụ maka ahịa gị.
Gịnị bụ Nhọrọ dị n'etiti Google AdWords na SEO?
Nyocha kachasị nke search engine bụ usoro nke atụmatụ na usoro eji eme ka ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa gaa na saịtị. SEO na - eji usoro eji eme ka Google algorithm ka onye mmadu nweta ugwo elu na nchoputa ihe. Ụzọ ndị a gụnyere iji okwu bara uru, na-ejikọta ọdịnaya gaa na ebe nrụọrụ weebụ a tụkwasịrị obi ma ọ bụ saịtị ndị ọzọ metụtara nakwa yana iji nkọwa dị mkpa meta.
Google AdWords, n'aka nke ya, na-eji mgbasa ozi akwụ ụgwọ. N'ụzọ dị otú a, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ aghaghị ịkwụ ụgwọ nyocha (n'agbanyeghị ma ọ bụ Google, Yahoo ma ọ bụ Bing) iji tinye akụ ha na nchọta nsonaazụ ọchụchọ Google. Ekwesiri iburu n'uche na onye nwe ulo a ghagh ugwo oge obula onye ozo ghoro na mgbasa ozi ya.
Ka anyị tụnyere Google AdWords na SEO
Anyị ga-amalite na ọnụahịa ọnụahịa. Ihe ukwu banyere SEO bụ na ọ nwere ike ibido n'efu ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ maka ọtụtụ mmemme ndị na-enyere gị aka na usoro SEO. Naanị ihe ị chọrọ ime bụ ịmara nke SEO usoro na-arụ ọrụ kacha mma maka enyemaka gị ma tinye ha n'ọrụ.
Otú ọ dị, ozugbo azụmahịa gị malitere, ị nwere ike ịhọrọ maka ọrụ SEO ọrụ, dịka Semalt, iji mee ka ibe weebụ dịkwuo ike ka i wee nwee ike ịnọ na egwuregwu ma tie aka mpi. Ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mpaghara SEO ma nwee nghọta site n'ịrụ ọrụ n'otu ebe ruo ọtụtụ afọ nwere ike inye gị azụmahịa na mgbalị ọ chọrọ.
Google AdWords nwere atụmatụ nke ịkwụ ụgwọ-kwa-click. Na atụmatụ a, onye ahụ ga-enwe ụfọdụ mmefu ego na ọ ga-akwụ ụgwọ oge ọ bụla onye ọrụ clicks na ad. N'ihi ya, ndị ọrụ ndị ọzọ ị nwere ike ịnweta, otú ahụ ka ị ga-akwụ ụgwọ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị gị ka ọ dị ntakịrị ọnụ na mbụ, ọ bụghị ma ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere mbipụta na mgbasa ozi na magazin.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekiri ma na-eduzi
Mgbe ị na-ele nlọghachi na ego, ị ga-ele anya ọnụọgụ nke ọnụọgụ Google AdWords na SEO nwere ike inye. Usoro abụọ a nwere ike inye ndị na-ekiri ihe dị ịrịba ama. Njirimara AdWords, na nke a, bụ na ọ nwere ike ịnweta ndị ọzọ na obere oge. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị anọgidesie ike ruo ogologo oge, ị ga - ahụ na ndị mmadụ ga - agbatịkwuo nchọta nsonaazụ ọchụchọ. Nkọwa dị mfe nke eziokwu bụ na nchọpụta anụ bụ ihe ndị ọrụ na-achọ. N'ikwu ya, AdWords ga-enye gị aka ma ọ bụ ndị na-ekiri ozugbo, ma ọ bụghị dị ka ihe ntụgharị dị ka SEO nke nwere ike ịnyekwuo ndị na-ekiri gị oge a chịkọtara.
Maka ọsọ, AdWords ga-aka mma. Maka SEO ọ ga - ewe oge maka ndị ọrụ iji hụ ebe nrụọrụ weebụ gị site na nsonaazụ ọchụchọ. Maka AdWords ezie, ị nwere ike ịnweta oke nso ugbu a n'ihi na Google AdWords nwere ike ịme ihe ngosi ndị ị họọrọ. SEO adighi adighi onodu ndi mmadu. Ihe SEO nwere ike ime bụ ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị dị mkpa nakwa na ndị na-ege gị ntị ga-achọta ya.
Gịnị Ka M Ga - ahọrọ: Google AdWords ma ọ bụ SEO?
Ugbu a na ị maara uru nke ọwa ahịa ọ bụla, ọ ga-adịrị gị mfe ịchọpụta onye kacha mma maka azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-agbalị ịmalite nduzi ngwa ngwa, AdWords ga-abụ nhọrọ zuru oke maka gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ka azụmahịa gị nwee ọganihu mgbe niile, mgbe ahụ, ị ​​ghaghị itinye ego na ọrụ SEO. Rịba ama, ịnweta ọwa ahịa ahịa abụọ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụhaala na ị setịpụrụ ihe ngosi igosi gị ma nọgide na-atụle ọganihu nke ọwa ahịa ọ bụla Source .